Ma Dhabaa In Riyad Mahrez Tagi Karo Kooxda PSG Kana Tagi Karo Kooxdiisa Man City? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Riyad Mahrez ayaa kaliya ku biiray kooxda Man City sanadkii 2018 laakiin kooxda heysata horyaalka Premier League ayaa durba lagu soo waramayaa inay diyaar u tahay inay lacag kaash ah ku iibiso xiddiga heerka caalami ee dalka Algeria.
Iyadoo ganaaxa City ee ganaaxa UEFA ay racfaan ka qaadaneyso ganaax labo xilli ciyaareed ah Mahrez ayaa laga yaabaa inuu ka tago Etihad Stadium, Paris Saint-Germain ayaa ah halka ugu macquulsan ee ay ku tegi karaan.
Weeraryahanka Manchester City Riyad Mahrez ayaa u furan inuu u dhaqaaqo kooxda heysata Ligue 1 Paris Saint-Germain, sida laga soo xigtay Calciomercato.
Kooxda Premier League ka dhisan ee City ayaa lagu soo waramayaa inay diyaar u tahay inay iska iibiso Mahrez halka PSG la rumeysan yahay inay tahay meesha ugu fiican ee xiddiga heerka caalami ee dalka Algeria uu doonayo.
Mahrez oo yimid magaalada Man City 2018, ayaa ku soo bilawday 15 ka mid ah 23 kulan oo uu saftay Premier League xilli ciyaareedkan.
Paul Pogba sawirka ma ka maqnaa? Kooxda Juventus ayaa lala xiriirinayaa inay u dhaqaaqdo xiddigii hore ee qadka dhexe, si kastaba ha ahaatee, Tababaraha Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa sheegay in xiddiggan la xushmeeyay uu joogi doono Old Trafford xilli ciyaareedka soo socda. Iyadoo taas maskaxda lagu hayo, Calciomercato wuxuu leeyahay Juve ayaa bartilmaamed ka dhiganeysa kooxda Lyon Houssem Aouar oo bedel u ah.
Daily Star ayaa warinaysa in kooxda Barcelona ay go’aansatay mushaharkooda bartilmaameedka iyo gooldhaliyaha kooxda Inter Lautaro Martinez. Real Madrid, United iyo Chelsea ayaa sidoo kale lala xiriiriyay xiddiga reer Argentina.
Fiorentina iyo xiddigga reer Talyaani ee Federico Chiesa ayaa waxaa doonaya kooxaha PSG, Juve, Inter iyo United, sida ay sheegeyso Le10Sport.
Angelino oo ku biiraya Barca? Daafaca dambeedka bidix ee City – oo amaah ku jooga kooxda Bundesliga RB Leipzig – ayaa soo jiitay kooxda heysata horyaalka LaLiga, sida laga soo xigtay Mundo Deportivo.
Sport markhaati ayaa sheegaya in kooxda Napoli ay diyaar u tahay inay iska iibiso weeraryahankeeda Arkadiusz Milik kadib markii ay ku guul darreysteen inay heshiis cusub ka saxiixdaan. Inter, Arsenal iyo Tottenham ayaa dhamaantood lala xiriirinaayay.
Iyadoo Milik uu bixi karo, Torino’s Andrea Belotti ayaa imaan kara Naples. La Gazzetta dello Sport ayaa warinaysa in Napoli, oo la soo saxiixatay Andrea Petagna bishii Janaayo ka hor inta aysan amaah ugu celin SPAL, laga yaabo inuu weeraryahanka ku daro heshiis Belotti.
Kai Havertz kooxda Juve macquul maahan, Calciomercato ayaa sidaa yiri. Dareenka kooxda Bayer Leverkusen ayaa ah ciyaaryahan baahi badan qaba laakiin Juve ayaa meesha ka saartay inay u dhaqaaqeyso madaama qiimaha lagu burburin karo 80 milyan euro. Havertz ayaa lala xiriiriyay kooxaha sida Bayern Munich, Liverpool, United iyo kuwa kale.
Iyadoo Hakad Ku Jiro Ciyaaraha Kala Duwan Ee Aduunka Siiba Horyaalada Qaarada Yurub Ayaa Hadana Ciyaartoy Qiimeeyey Xanuunka Coronavirus?